Dhageyso: Faah-faahin dheeraad ah oo ku saabsan haweeneydii is-qarxin rabtay ee la toogtay +(SAWIR) | HalQaran.com
Dhageyso: Faah-faahin dheeraad ah oo ku saabsan haweeneydii is-qarxin rabtay ee la toogtay +(SAWIR)
Haweeneyda la sheegay inay is-qarxin rabtay ee maanta lagu toogtay Baardheere
Baardheere (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah ka soo baxaya haweenay Ciidamada ammaanka ee Degmada Baardheere Khamiistii maanta ay ku toogteen Degmadaasi.
Xuseen Maxamed Xasan, taliyaha Amniga degmada Baardheere oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegaya in aan waxba ka jirin wararka sheegayay inay Haweeneydaasi ku xirnaayeen waxyaabaha qarxa, hayeeshee kaliya ay bambo ku tuurtay ilaalada saldhiga.
Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in haweenaydaasi ay ku xirnaayeen waxyaabaha Qarxa oo markii Ciidamada ay toogteen laga furay, walow aysan wax caddeyn soo bandhigin.
Wuxuu intaasi ku daray, taliyaha amniga Degmada Baardheere ayaa sheegay haweenaydaasi kaliya Saldhiga ciidan joogay inay bambo ku tuurtay oo laba Askari oo ka mid ahaay Askarta Saldhiga dhaawacyo fudud ay ka soo gaareen Qaraxaasi.
Intaasi kadib ciidan kale oo joogay Saldhiga ayaa rasaas la dhacay haweenaydaan oo xirnayd Xijaab, islamarkaana ka soo dagtay gaari caasi ah, taasi oo meesha ku geeriyootay.
Dhinaca kale, guddoomiye ku xigeenka gobolka Gedo, Sheekh Maxamed Xuseen Isaaq al-qaadi oo wareysi gaar ah siiyay laanta Af Soomaaliga ee VOA-da ayaa sharraxaad ka bixiyay sida ay dhacdadaasi u dhacday iyo haweeneydaasi is-qarxin rabtay la sheegay qaabka loo toogtay.
Hoos ka dhageyso Wareysiga oo buuxa:
Sheekh Maxamed Xuseen Isaaq al-qaadi